ရိဒ်ရေကန်ကို အခြေပြု၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရန် ဟိုတယ် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ ဆောင?? - Yangon Media Group
ရိဒ်ရေကန်ကို အခြေပြု၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရန် ဟိုတယ် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ ဆောင??
ရိဒ်ခေါဒါရ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂
ချင်း ပြည်နယ်ခရီးသွားကဏ္ဍ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပူးပေါင်းကာ ချင်းပြည်နယ်သို့ခရီး သွားဝင်ရောက်မှုပိုမိုများပြားလာ စေရန်နှင့် ပြည်နယ်၏ဒုတိယ မြောက်ခရီးသွားဒေသအဖြစ် ရိဒ်ရေကန်အခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖော် ဆောင်ရန်အတွက် ဟိုတယ်တည် ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ သိရသည်။
”သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး အောင်လုပ်ဖို့ နေရာအနေအထား ကိုတော့ အကြိုကွင်းဆင်းလေ့လာ စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ရိဒ်ရေကန်ကို ခရီးသွားဒေသအဖြစ် တိုးချဲ့နိုင်ဖို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကို ပထမအဆင့်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဟိုတယ်ဆောက်ဖို့နေရာ အတိအကျကိုတော့ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ ရေးဝန်ကြီးဌာနက လာရောက် ကြည့်ရှုပြီးဖြစ်လို့ မကြာခင်အတည် ပြုမှာပါ။ လောလောဆယ် ဟိုတယ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ၊ စိတ်ဝင်စားသူ ၁ဝ ဦးလောက်ရှိနေပါတယ်” ဟု ချင်းပြည်နယ် စည်ပင်၊လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဦးဆလိုင်း အိုက်ဇက်ခင်က ပြောသည်။
လာမည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ရိဒ်ရေကန်ကို အာဆီယံရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်ဒေသအဖြစ်အသိ အမှတ်ပြုလာစေရန် ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်နေသည့် အပြင် ယခုပွင့်လင်းရာသီမှအစပြု၍ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက် လာသည့် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်မှဧည့်သည်များ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဧည့်သည်များအနေဖြင့် ချင်းပြည် နယ် မြို့ကြီးများနှင့် အမှတ်တရနေရာများ၊ ကျေးရွာအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖောင်ဆောင်လျက်ရှိသည့်ကျေးရွာများတွင် ညအိပ်လည်ပတ်နိုင်ရန်အထိ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ချင်းပြည်နယ်ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယခုအခါ ချင်းပြည်နယ်မြို့ ကြီးများတွင် အဆင့်မီဟိုတယ်များ တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး ယခုပွင့် လင်းရာသီ၌ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ် စပ်ရိဒ်ရေကန်၊ ဟားခါး၊ တီးတိန်၊ ဖလမ်းမြို့တို့တွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဧည့်သည်များ တည်းခိုနိုင်ရန် ပုဂ္ဂလိကတည်းခိုရိပ်သာများ ရှိနေ ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။